UV na ule ịka nká - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
UV na ule ịka nká nke okpomọkụ a na-akpọ nyocha ihu igwe na-enyocha ogo nke ihe ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụrụ na ha ezute arụmọrụ na ndụ ha niile. Nnwale a na-eme ka ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, dị ka iru mmiri dị elu, nnukwu UV-radieshon na ọnọdụ dị elu.
Anyị na-aga n'ihu na-anwale ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa USB niile
- Ndị a gwara ihe na-akpọpu akụkụ
-Fiber optic splice mmechi
-Fiber optic nkesa igbe
-FTTH dobe eriri mwekota
Emechara ụlọ nnwale na akpaghị aka, nke nwere ike izere mmejọ mmadụ iji jide n'aka na izi ezi na izi ezi nke nnwale ahụ. Usoro ule ịka nká nke ihu igwe na-agụnye itinye ngwaahịa n'ime ime ụlọ na iru mmiri, UV radieshon, ọnọdụ okpomọkụ.
Ule a ga - amalite iri na abuo nke ịrị elu ma daa. Usoro nke ọ bụla gụnyere awa ole na ole ọnọdụ ihu igwe na-eme ihe ike. All achịkwa radiometer, temometa wdg The radieshon, okpomọkụ, iru mmiri ruru na oge nwere dị iche iche ụkpụrụ dabere na ụkpụrụ EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 maka eletriki nkesa ngwa, na IEC 61284 maka efefe n'elu eriri optic cable, na ngwa.
Anyị na-eji ule ule na-esote ngwaahịa ọhụrụ tupu ịmalite, maka njikwa mma kwa ụbọchị, iji jide n'aka na ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta ngwaahịa ndị na-egbo mkpa chọrọ.